Tonga amin’ny tsontsori-mamba hisarahana. Izay no azo ilazana ireo ekipa eo amin’ny sokajy N1A lehilahy sy vehivavy miatrika ny fiadiana ny « Coupe du Président » amin’ilay atao hoe Top 8 eo amin’ny taranja basikety. …Tohiny
Hanam-bahiny ny Kung Fu Wushu izay manana ny foibeny etsy 67 ha amin’io herinandro io. Amin’ny talata faha-16 avrily 2018 tokoa mantsy, dia handray an’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Kung Fu Wushu avy any Chine …Tohiny
Fanafihana mitam-piadiana : Voasambotra teny Ambanidia i “Ra-Cô”
Nanaovan’ ny polisin’ny UIR sarika am-pandriana teny amin’ny trano fonenany teny Volosarika Ambanidia ny alakamisy vao maraina tokony ho tamin’ny 05 ora tany ho any i Ra-Cô, jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana mitam-piadiana. Araka ny loharanom-baovao, …Tohiny
Mahajanga : Olona 13 nararin’ny fihinanana trondro nisy poizina
Olona miisa 13 no fantatra fa marary mafy, ary naiditra hopitaly vokatry ny fihinanana trondron-dranomasina voalaza fa nisy poizina, omaly tany amin’ny fokontany Antanambao Sotema Mahajanga. Araka ny fampitam-baovao dia voalaza fa minitra vitsy taorian’ny …Tohiny